Sawirro: Madaxweyne Xaaf Oo Lagu Soo Dhoweeyay Gaalkacyo – Goobjoog News
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) oo ay wehliyaan wasiirro iyo xildhibaanno ka tirsan maamulkiisa oo saraf dhinaca dhulka ah uga soo anbabaxay magaalada Cadaado ayaa maarta gaaray magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Madaxweyne Xaaf ayaa safarkiisa kusii maray deegaano dhowr ah oo u dhaxeeyay Cadaado iyo Gaalkacyo sida Gelinsoor, Bandiiradley, Seddax xigelle, Dagaari iyo tuulooyin kale, isagoo dadka halkaasi ku nool kala hadlayey inay maamulka taageeraan islamarkaana ay nabadda ka shaqeeyaan.
Madaxweynaha Galmudug iyo wafdigiisa waxaa magaalada Gaalkacyo kusoo dhoweeyay maamulka degmada kan Gobolka iyo qeybaha bulshada.
Xirsi Yuusuf Barre, duqa Degmada Gaalkacyo ayaa hadallo soo dhaweyn ah kadib sheegay in magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug uu u baahanyahay dib u heshiisiin si bulshada ku nool ay nabad u helaan.
Waxgaradka iyo bulshada kale ee ku noool Gaalkacyo iyo deegaannadii uu soo maray madaxweyne Xaaf ayaa sheegay inay tahay baahida ugu weyn oo ay qabaan helitaanka amni leysku haleyn karo.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka shaqeyn doono amniga gobolka mudug iyo guud ahaan deegannada kale ee maamulka isagoo bulshada ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Xukuumadda Hindiya Oo Ogolaatay In Maxaabiista Soomaalida Lasoo Qaado, Xabsigana Ku Dhameystaan Gudaha Dalkooda
Dowladda Oo Soo Dhoweysay Go’aanka Ay India Dib Dalka Ugu Soo Celinayso Maxaabiista Soomaalida
Dowladda Oo Soo Dhoweysay Go'aanka Ay India Dib Dalka Ugu Soo Celinayso Maxaabiista Soomaalida
Ciidamada Puntland Iyo Kuwa Al-shabaab Oo Ku Dagaallamaya Bari